बेलका नगरपालिकामा दाँतको उपचार निःशुल्क – रिपोर्टर्स नेपाल
बेलका नगरपालिकामा दाँतको उपचार निःशुल्क
२०७६ असार ६ गते प्रकाशित, l १३:२४
असार ६, काठमाण्डौ । उदयपुरको बेलका नगरपालिकावासीले निःशुल्क रूपमा दाँतको उपचार गर्न पाउने भएका छन् ।
बेलका घर भई काठमाडौं बस्ने युवाहरु आबद्ध बेलका विकास समाजले नगरपालिकाको केन्द्र रामपुरमा असार ७ गते (शनिवार) निःशुल्क दन्त शिविर संचालन गर्न लागेको हो ।
शिविरका लागि काठमाडौंको ॐ समाज डेन्टल हस्पिटलबाट चिकित्सकहरुको ६ सदस्यीय टोलीसँगै अत्याधुनिक उपकरण बेलका लगिने आयोजक बेलका विकास समाजका अध्यक्ष महेन्द्र थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार शिविरमा आवश्यकताअनुसार दाँत निकाल्ने, भर्ने, सफा गर्ने तथा परामर्श सेवा प्रदान गरिने छ ।
उदयपुर क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सांसद डा. नारायण खड्काले दन्त शिविर उपयुक्त समयमा चलाउन लागेको भन्दै आयोजकलाई आगामी दिनमा पनि यस्ता सामाजिक काममा सकृय हुन युवाहरुलाई सुझाब दिए । बेलका नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले नगरवासीलाई आवश्यक सेवा समाजले प्रदान गर्न लागेको र बढिभन्दा बढी नागरिकलाई लाभान्वित गराउन नगरले पनि प्रयास गरिरहेको बताए ।
शिविरका लागि बेलका नगरपालिकाले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको उनले बताए । ॐ समाज डेन्टल हस्पिटलका संचालक डा. सुभाष घिमिरेले उदयपुर जस्तो ठाउँमा पूगेर आफ्नो हस्पिटलले सेवा प्रदान गर्ने अवसर पाएको र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबैखालको प्रयास गर्ने बताए ।
आयोजक बेलका विकास समाजका कोषाध्यक्ष बाबुराम खतिवडाले बेलकामा अहिलेसम्म भएका कुनै पनि शिविरभन्दा बढी सेवा प्रदान गरिने भन्दै शिविरबाट ५ हजार नागरिकलाई सेवा दिने दाबी गरे । शिविर शनिवारमात्रै चल्ने छ । खतिवडाका अनुसार बेलकामा उपचार सम्भव नभए आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विरामीलाई काठमाडौंसम्म पुर्याएर निस्शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था आयोजकले मिलाउने छ । बेलका नगरपालिका उदयपुरको पूर्वी भेगमा अवस्थित नगरपालिका हो । यो नगरपालिकामा ५२ हजार बढी जनसंख्या छ ।